Systemback, faka kwaye wenze i-USB ebukhoma kwi-Ubuntu 18.04 / 18.10 | Ubunlog
Systemback, faka kwaye wenze inkqubo ebukhoma kwi-Ubuntu 18.04 / 18.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba sinokwenza njani faka iSystemback kwi-Ubuntu 18.04 kunye ne-18.10. Umlingane usixelele ngesi sicelo kwixesha elidlulileyo kwi- nqaku yangaphambili. Njengoko sendibonisile kwinqaku, sisicelo esilula nesisebenzayo. Oku kuya kuququzelela ukwenziwa kweekopi zokulondoloza zenkqubo ngokulawula iifayile zoqwalaselo zabasebenzisi. Kwimeko apho sinengxaki kwi-OS yethu, iya kusivumela ukuba sibuyise ngokulula imeko yangaphambili.
Nangona esi sicelo asisekho kuphuhliso kwaye asixhaswanga, umgangatho, ukusebenza kunye nokusebenza kwesicelo kusemgangathweni. Nanamhlanje, sisicelo esisetyenziswa ngokubanzi linani elikhulu labasebenzisi, njengoko sinika imisebenzi eluncedo kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Kule migca ilandelayo siza kubona indlela yokufaka iSystemback ku-Ubuntu 18.04 kunye no-Ubuntu 18.10. ISystemback yinkqubo elula yokugcina kunye nokubuyisela usetyenziso, ikhutshwe phantsi kwemiqathango yelayisensi ye-GPLv3.
1 I-Systembak isebenzisa
2 Faka iSystemback
2.1 Faka kwi-Ubuntu 18.04 kunye no-Ubuntu 18.10
3 Yenza inkqubo ebukhoma kwinkqubo yethu yangoku
Amanye amathuba anokubandakanywa nguSystemback ngala:
Iya kusivumela yenza i-backups zenkqubo kunye neefayile zokumisela umsebenzisi ngokukhawuleza nangokulula.
Sinako faka inkqubo yokusebenza ukusuka ekuqaleni
Ivumela buyisela inkqubo kwimeko yangaphambili, Njengomboniso we-Virtualbox.
Ndiyakwazi yenza umfanekiso we-bootable we-ISO ukusuka kufakelo olukhoyo.
Ivumela ikopi yenkqubo ukusuka kolunye ulwahlulo ukuya kolunye.
/ Ungqamaniso kulawulo lwasekhaya ngokucofa kanye.
Ukulungiswa yenkqubo Ukusebenza.
Ubuntu 16.04 kunye nabasebenzisi be-14.04 basenokufaka iSystemback besebenzisa iPPA. Kufuneka nje baqhube le miyalelo ilandelayo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Njengoko sele ndiqaphele imigca engentla, Umbhali weSystemback wayeka ukukhula ngo-2016 ke Ubuntu 18.04 no-18.10 abekho kuluhlu oluxhaswayo. Ukuba kwezi nguqulelo uqhuba imiyalelo yangaphambili, uya kubona impazamo elingana okanye efanayo nale ilandelayo:
Faka kwi-Ubuntu 18.04 kunye no-Ubuntu 18.10
I-Systemback yokubini ye-Ubuntu 16.04 ukuba iyahambelana no-Ubuntu 18.04 / 18.10, unako yongeza Ubuntu 16.04 PPA kwi-18.04 / 18.10 ngalo myalelo ulandelayo:
Emva koko siya kuthi ukungenisa isitshixo sokusayina se-GPG kule PPA Umphathi wephakheji unokuqinisekisa utyikityo. Isitshixo sokutyikitya sifumaneka kwi iphumeleli.net. Siza kuyongeza kwinkqubo yethu ukunqanda impazamo yokuhlaziya indawo yokugcina ngokuchwetheza kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Okwangoku, unako Hlaziya uluhlu lwephakheji kwaye ufake iSystemback. Kwisiphelo esinye sibhala:
Emva kofakelo, unako qala iSystemback kwimenyu yenkqubo.
Siza kudinga bhala igama eligqithisiweyo lokusebenzisa le software. Emva kokuyibhala, cofa iqhosha «OK«.
Njengoko sibona, kule nkqubo yenkqubo, siya kuba neendlela ezahlukeneyo ezikhoyo. Siza kuba nakho ukwenza amanqaku okubuyisela enkqubo yethu, sibuyisele inkqubo kwindawo yangaphambili, ikopi yenkqubo kwenye isahlulelo, faka inkqubo kwisahlulelo esitsha, yenza inkqubo ebukhoma (umfanekiso we-ISO oqalekayo), lungisa inkqubo, kwaye uhlaziye inkqubo.
Yenza inkqubo ebukhoma kwinkqubo yethu yangoku
ISystemback inako yenza ifayile ye-ISO yesiko kwinkqubo yethu yangoku. Yonke inkqubo kunye nefayile zingabandakanywa kwi-ISO. Singathatha inkqubo yethu yokusebenza, kunye noqwalaselo lwethu, naphina.
Ukwenza oku, cofa nje kwi iqhoshaYenza inkqubo ebukhoma" kwaye emva koko unike igama ifayile ye-ISO. Uya kuba nenketho yokubandakanya iifayile zedatha yomsebenzisi. Emva koqwalaselo, cofa kwiqhosha "Yenza entsha”Ukwenza inkqubo esebenzayo.
Emva kokuba inkqubo ebukhoma yenziwe, ifayile ye -sblive evelisiweyo inokuguqulwa ibe yifayile ye-ISO. Apha Gcina ukhumbula ukuba ukuba ifayile ye-sblive inkulu kakhulu, ayinakukwazi ukuguqulwa ibe yifayile ye-ISO.
Olunye ukhetho esinokulufumana iya kuba kukunokwenzeka yongeza ipeni yokuqhuba kwikhompyuter yethu kwaye wenze i-USB Live ngenkqubo yethu yokusebenza. Cofa iqhosha lokulayisha kwakhona ukubona ukuqhuba kwe-USB. Nje ukuba isixhobo ekujoliswe kuso sikhethwe, cofa nje kwiqhosha «Bhala kwindawo oya kuyo"kwaye ulinde.
Ukuba inkqubo yakho ineenkqubo ezininzi kunye neefayile, le nkqubo ingathatha ixesha.
Nje ukuba indalo igqityiwe, siya kuba nakho ukusebenzisa ifayile ye- I-USB esebenzayo. Sinokulungisa / ukufaka inkqubo yakho yesiko kwezinye iikhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Systemback, faka kwaye wenze inkqubo ebukhoma kwi-Ubuntu 18.04 / 18.10
UMario Peña Freyle sitsho
UMartin Andres Escorcia Torres
Phendula uMario Peña Freyle
Ayisasebenzi kubuntu 18.4 nge kernel 5.3.0 🙁